> Resource > Video > Sida loo Beddelaan VOB in MP3
VOB waa qaab weelka ee DVD-video warbaahinta ah. Waxaa ku jira dhammaan macluumaadka ugu muhiimsan ee DVD disc ah, sida video, audio, Cinwaan, menu iyo wixii la mid ah. Haddii aad soo ururiyay badan oo DVDs, waxaad ka heli kartaa files badan VOB baahisey via diinta ama habab kale. Waa hagaag, ma doonaysaa in aad hesho ugu soo baxay ka mid ah DVD uruuriyaa weyn (foomamka file VOB iyo labada foomamka DVD disc)? Haa, waa shaki ku jirin fikrad weyn oo lagu soo saaro MP3 ka VOB ama DVD in waxaad kor saartaa ciyaartoyda MP3 la qaadi karo si aad naftaada waqti kasta iyo meel kasta oo Raaxo.
Haddii aad rabto in aad si loogu badalo VOB in MP3 ama si toos ah uga DVD disc ah Macdan MP3, waxaad si fudud oo dhan samayn karo VOB fiican si MP3 Converter - Wondershare Video Converter ( Video Converter Ultimate for Mac ). Marka laga reebo, waxa jira labo sababood oo kale oo aan doonayaa in aan ku talinaynaa smart app. Mid ka mid ah waa inuu kaa caawiyo inaad hesho kuwan raadkaygay audio ka video files ah oo aan wax khasaare ah oo tayo leh audio, kan kale waa in ay oggolaadaan in aad si aad u hesho gabal kasta oo ka mid track oo dhan audio galay file hal, taas oo feature cajiib ah arrin u caashaqi jiray music kuwaas oo doonaya in ay u kala heeso kasta ee DVD music disc ah.
Hadda, ha i tusaan sida loo badalo VOB in MP3 iyo badalo DVD in MP3.
Tallaabo 1: Ku dar files si VOB in ay MP3 Converter
Haddii files yihiin qaar ka mid ah files VOB kaydiyaa on your computer, waxaad iyaga ku dari kartaa in barnaamijkan adigoo riixaya "Beddelaan" tab> "Add Files" ikhtiyaar in caleenta iyo dooran files VOB ka PC in ay soo dhoofsadaan.
Wixii DVD disk ah, ka dib markii aad geli, waxaad riixi kartaa in ay maraan si ay darawalka DVD aad u shuban DVD.
Marka files doonayo lagu qoran Murayaad ee app this, soo socda, waxaad u baahan tahay in ay doortaan MP3 format sida wax soo saarka. Si tan loo sameeyo, waxaad uun ku dhufatey "Qaabka" button dhinaca midig ee interface ugu weyn in la furo liiska qaabka, ka dibna dooro "MP3" ka "qaab"> "Audio" category.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad ka gooyay file a complete galay clips iyo siday u kala horreeyaan iyaga ku badbaadin ee files kala duwan, shaqo waxaad u samayn kartaa si toos ah app this. Just guji faylka, ka dibna tag "Edit"> "jar" menu, socda, si gooni gooni ah jiidi oo hoos u labada sliders hoos bar horumarka u deji waqtiga iyo bilowgii iyo soo afjaridda ah, riix "maqas" icon Macdan video clip ee la doortay . Sii wad in aad ku soo celiyaan nidaamka, si aad u heli kartid dhammaan clips aad rabto. Ugu dambeyntii, dhufatey "Ok" dhammaan badbaadiyo.
Tallaabo 3: Ka billow diinta VOB in MP3 ama DVD in MP3
Dhinaca geeska midig ugu hooseysa tani ku Video Converter 's interface ugu weyn, waxaa jira badhan "Beddelaan". Just waxa ku dhacay si loogu badalo VOB in MP3. Waxaad arki doonaa app this waa diinta dhammaan qeybaha yaalana galay file MP3 kasta.
Markii diinta la sameeyo, waxaad ka heli kartaa kuwan MP3 faylasha sida Jidka wax soo saarka ama adigoo riixaya "Folder Open" button.